စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျမြားအား မိုးမကမြီကပငျ အကူအညီပေးနိုငျရနျ ရခိုငျအစိုးရက အမွနျဆုံး အကူအညီပေးသငျ့ကွောငျး အရေးကွီးအဆိုအား ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောတှငျ ဦးကြျောဇောဦး၏ ထောကျခံ/အကွံပွု ဆှေးနှေးခကျြ – Kyaw Zaw Oo's Blog
May 11, 2016 March 9, 2019 kyaw zaw oo
စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျမြားအား မိုးမကမြီကပငျ အကူအညီပေးနိုငျရနျ ရခိုငျအစိုးရက အမွနျဆုံး အကူအညီပေးသငျ့ကွောငျး အရေးကွီးအဆိုအား ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောတှငျ ဦးကြျောဇောဦး၏ ထောကျခံ/အကွံပွု ဆှေးနှေးခကျြ
စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအား မိုးမကျမီကပင် အကူအညီပေးနိုင်ရန် ရခိုင်အစိုးရက အမြန်ဆုံး အကူအညီပေးသင့်ကြောင်း အရေးကြီးအဆိုအား ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ဦးကျော်ဇောဦး၏ ထောက်ခံ/အကြံပြု ဆွေးနွေးချက်
နေ့စွဲ – ၁၁ – ၀၅ – ၂၀၁၆
လွှတ်တော်ဥက္ကဌနဲ့တကွ လေးစားအပ်ပါသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ ခင်ဗျား . . .
ကျွန်တော်ကတော့ စစ်တွေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဇောဦးဖြစ်ပါတယ်။ အခုကျွန်တော် တင်ပြဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အမှတ်(၂)မဲဆန္ဒနယ်မြေက ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်လွင် တင်သွင်း ခဲ့တဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရေးတကြီးအဆိုကို ထောက်ခံပြီးတော့ လိုအပ်သလို အကြံပြုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကျော်လွင်ရဲ့အဆိုကို အတိအကျ ဖတ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ “လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် (AA) တပ်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် တို့ ၏ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ် စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးလာကြရသော ဒေသခံတိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များ၏ စားဝတ်နေရေး နှင့် လူမှုကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို မိုးမကျမီ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ အမြန်ဆုံး အကူအညီပေးသင့်ကြောင်းကို တိုက်တွန်း သည့် အရေးတကြီးအဆို” ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာ ကြားညှပ်ပြေားချင်တာလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ မနေ့က ဦးကျော်လွင်က အဆိုကို တင်သွင်းပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ နယ်စပ်ရေးရာနဲ့ လုံခြုံရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်းက ဒီအရေးကြီးအဆိုကို အဆိုအနေနဲ့ မဆွေးနွေးစေလိုကြောင်း မှတ်တမ်းတင်တာပဲ ပြုလုပ်စေလိုကြောင်း ကနဦးမှာ ပြောကြားခဲ့ ပေမယ် ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဆွေးနွေးရာမှာကျတော့ ဗိုလ်မှူးကြီးကပဲ ဘာပြောသလဲ ဆိုတော့ အဆိုကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးပါ၊ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ဒီလို ဒီလိုမျိုးတွေ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုတွေ ရှိတယ်၊ အခြား အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ဒီလို ဒီလို မျိုးတွေ ကူညီတာတွေရှိတယ်၊ အဲဒါတွေကိုတော့ မှတ်တမ်းတင် ပေးပါ ဆိုပြီးတော့ ဒုတိယအကြိမ်မှာ ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီမှာ ကြားညှပ်ပြောသွားချင်တာက အဲသလိုမျိုး လုံခြုံရေးရာဝန်ကြီး အနေနဲ့ အဆိုတင်သွင်းဆွေးနွေးခြင်းကို မကန့်ကွက်တော့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား ဗိုလ်မှူးကြီး ထိန်လင်း ရဲ့ပြောကြားချက်အရ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ် နဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် တို့မှာ မကြာခင်က (ရက္ခိုင့်တပ်မတော် လို့ မိမိကိုယ်ကို ခေါ်ကြတဲ့) အေအေ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် တို့ အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာရတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် IDP ဦးရေ ဟာ (၁၉၀၀) ဦး ရှိနေတယ် လို့သိရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဒီထက်မက များကောင်း များနိုင်ပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေကို အကူအညီပေးဖို့လိုအပ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အငြားပွားချင်မှ အငြင်းပွားကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်ကို အငြင်းပွားကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အကူအညီပေးဖို့ဆိုတာကို ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အား တိုက်တွန်းကြောင်းအဆို အနေနဲ့ အတည်ပြုဖို့ လိုအပ်ပါရဲ့လားလို့ အငြင်းပွားချင်တဲ့လူ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို ကျွန်တော် ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး အဆိုတစ်ခုအနေနဲ့ အတည်ပြုတိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကို လက်ရှိ တာဝန်ယူ ထားသူတွေအနေနဲ့ ဘယ်တုန်းက ဘယ်လို ဟိုဟာလေး တို့တိ တို့တိ၊ ဒီဟာလေး တို့တိ တို့တိ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်လေး ဘာလေး ဟိုတုန်းက ဒီတုန်းက ပေးထားပါတယ် ဆိုရုံနဲ့မပြီးတော့ဘူး။ တာဝန်တစ်ခု အနေနဲ့ ကျကျနနတာဝန်ယူပြီးတော့ အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့ ရေတိုရေရှည်တာဝန်ယူပြီး ပီပီပြင်ပြင် ဆောင်ရွက် ပေးကြရတော့မှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖို့ လုပ်ပိုင်ခွင့် နဲ့ အဲဒီတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ ရံပုံငွေဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍကိုပါ ရှာဖွေစုရုံးခွင့် စီမံခွင့်ရလာမှာ ဖြစ်တယ်။ မိုးမကျခင် ဘာမှ လုံလုံလောက်လောက်မပြင်ဆင်ရသေးတဲ့ အနေအထားမှာ မိုးရေချိန် လက်မ တစ်ရာနှစ်ရာ ရွာတတ်တဲ့ ဒေသမျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်တွေ သွားပေးထားပြီးပြီလေ . . . ကျွန်တော်တို့ ကူညီပြီးပြီပဲ . . . လို့ ဆိုရုံအနေအထားနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဆိုတစ်ခုအနေနဲ့ အတည်ပြုပြီး လက်ရှိဒေသန္တရအစိုးရကို တိတိပပ တွန်းအားပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အချက် လေးချက် ပိုင်းခြားပြီး ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
နံပါတ်တစ်အချက်၊ ဒီ အယောက် (၁၉၀၀) ကျော် (၂၀၀၀) ဝန်းကျင်သော တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားတွေ (နောက် ထပ်တိုးရင်လည်း ထပ်တိုး သလောက်ပေါ့) ဒီလူသားတွေဟာ စစ်မက်ဘေးရန်ကြောင့် ဘ၀နေထိုင်မှု မလုံခြုံတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြေးလွှား ပုန်းရှောင်နေကြရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုရပါမယ်။ ဒုက္ခသည်တွေ ရှိနေရင် ရှိတယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုကြရပါမယ်။ ဒါကို ရခိုင်က အသိအမှတ်ပြုရမယ်။ မြန်မာကလည်း အသိအမှတ် ပြုရမယ်။ ဒါမှလည်း ကမ္ဘာကလည်း အသိအမှတ်ပြုမှာဖြစ်တယ်။
နံပါတ်နှစ်အချက်၊ အခြားတပါးက ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ရေမျောကမ်းတင်လာသူတွေ မဟုတ်တဲ့ မိမိတို့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားတွေ အပြစ်မဲ့အရပ်သားတွေဟာ နိုင်ငံတွင်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်လို့ အခုလိုဒုက္ခရောက် နေကြရတဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအနေနဲ့ နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ ဒီဒုက္ခသည်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး စောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ရာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပါ ပုဒ်မ-၃၅၆ ပုဒ်မ-၃၅၇ အစရှိတဲ့ ပြဌာန်းချက်တွေအရ နိုင်ငံသားတွေဟာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမှုကို ရထိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံသား ဒုက္ခသည် တွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာမှာ IDP ဆိုရင် IDP တွေအဖြစ်နဲ့ မိုးရာသီကို မိုးလုံလေလုံ ဖြတ်သန်းနိုင်မယ့် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ ဆောက်ပေးကြရပါမယ်။ အခု ဒုက္ခသည်ဖြစ်နေသူအများစုဟာ တောတောင်ကို မှီတင်းပြီး ၀ါးရှာ ငါးရှာ တစ်နေ့စာကို တစ်နေ့ ရှာစားနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့အလျောက် အခုအခြေအနေမှာ တောထဲတောင်ထဲ မ၀င်နိုင်တဲ့အတွက် စားရေးသောက်ရေး ခက်ခဲကုန်ပါပြီ။ စားရေရိက္ခာကို ပြတ်လပ် မသွားအောင် စီစဉ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ဇွန်လ ရောက်တာနဲ့ ကျောင်းသားအရွယ်တွေ ကျောင်းတက် ကြရတော့မယ်။ ဒီအတွက်လည်း ကျောင်းသားတွေ ပညာသင်ကြားနိုင်အောင်လည်းပဲ အာဏာပိုင်တွေက စီစဉ်ပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်းရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ရေ၊ မီး၊ အိမ်သာ တွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်အောင် စီစဉ်ရမယ့် အပြင် ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှုကို လွယ်လင့်တကူ လက်လှမ်းတမီ ဖြစ်အောင် စီမံဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ စခန်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်းအောင်၊ လုံခြုံရေးအရ အလွယ်တကူတာဝန်ယူနိုင်အောင် စခန်းအငယ်လေးတွေ ခွဲထားမယ့်အစား စုစည်းစခန်းတွေ ဖြစ်အောင် စီစဉ်နိုင်လေ အကူအညီပေးရသူတွေအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေ ချောမွေ့လေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက်လည်း အကာအကွယ်ပိုရလေဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်သုံးအချက်၊ ပြည်နယ်အဆင့် စစ်ဘက်ပိုင်း လုံခြုံရေးပိုင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ပြောသွားတာကို ကြား လိုက်တာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အကြောင်းအရာက ဆက်စပ်နေတဲ့အတွက် အခုအကြံပြုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာ အဲဒါကို မဖြစ်မနေ ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့စကားက “နယ်မြေ အခြေအနေတွေဟာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒုက္ခသည်တွေကို မိုးမကျမီ သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာတွေဆီ ပြန်ပို့နိုင်မယ့် အခြေအနေ ရှိပါတယ်” ဆိုတဲ့ စကားပါ။ နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိတယ်၊ တို့ ထိန်းထားပြီ လို့ တစ်ဘက်က ဆိုတယ်။ နောက်တစ်ဘက်ကလည်း ငါတို့ အဲဒီနေရာမှာ ရှိတယ်၊ သတိထား လို့ ဆိုပြန်တယ်။ အဲဒီတော့ ဗိုလ် ဗိုလ်ချင်းတွေ့ကြလို့ တိုက်ကြရင် ကြားကခံရတာက ပြည်သူလူထုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြေစာပင်ကတော့ ပြည်သူတွေပါပဲ။ အတည်မပြုနိုင်သေးပေမယ့် အခုလည်း တိုက်ပွဲသတင်းတွေကြိုကြားကြိုကြား ကြားနေရဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုက္ခရောက်ကြရတဲ့ အခြေအနေတွေကြားမှာ အမှန်တကယ် ဒုက္ခရောက် ကြရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ရှိပါရဲ့သားနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ မရှိဘူးလို့ ပြချင်တဲ့အတွက် ဒုက္ခသည်တွေကို အတင်းအဓမ္မ နေရပ်ပြန်ပို့ခြင်းတွေ မလုပ်မိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ တကယ့်ကို ဝေးလံ ခေါင်သီတဲ့နေရာက လူတွေပါ၊ နေ့တဒူဝ တောထဲကို ၀င်ပြီး ၀မ်းစာ ရှာနိုင်မှ ထမင်းစားကြရတဲ့လူတွေ ဒီဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ အများကြီးပါ ပါတယ်။ မတည်ငြိမ်တဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားမှာ တောထဲကို မ၀င်ဝံ့ကြပါဘူး။ တောထဲကို ၀င်သွားလို့ တောထဲမှာ တစ်ဘက်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ရင် သူပုန်ကို သတင်းသွားပေးတယ် လို့ သံသယ အဖြစ်ခံရနိုင်တယ်။ အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလို တင်းမာမှုရှိနေတဲ့ အနေအထားမျိူးမှာ အထမ်းအမား ပေါ်တာ အဖြစ် အတင်းအဓမ္မ ခေါ်ယူခိုင်းစေခြင်း ခံရနိုင်တဲ့ အန္တရယ်က အမြဲရှိနေတယ်။ ဒီလိုပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့ သာဓကတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာက နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပါပြီလို့ ဘယ်လောက်ပဲဆိုဆို ကျွန်တော်တို့တော့ စိတ်မချနိုင်ဘူး။ အပြစ်မဲ့ အရပ်သားတွေအတွက် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် လုံခြုံမယ့် နေရာမှာ စုစည်းစခန်းချထားပေးဖို့ကိုပဲ ကျွန်တော် ထောက်ခံဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
နံပါတ်လေးအချက်၊ ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက် တစ်နှစ် နှစ်ဝက် စသည်ဖြင့် ကာလအလိုက် လိုအပ်တဲ့ ဘဏ္ဍာရေး ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးတော့ ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေ စုစည်းရေးအတွက်ပါ ပြင်ဆင်ကြဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း အကြံပြု ဆွေးနွေး တင်ပြလိုပါတယ်။
အတိုချုပ်ရင် – (တစ်အချက်) စစ်ရှိနေတယ်၊ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ ရှိနေတယ်။ (နှစ်အချက်) ဒါကြောင့် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့ စနစ်တကျ စား/နေ/ကျန်းမာ/လူမှု/ပညာ အကူအညီပေးဖို့လိုတယ်။ (သုံးအချက်) မတည်ငြိမ်သေးဘဲနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်ပို့မယ်ဆိုရင် အပြစ်မဲ့ အရပ်သားတွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်။ (လေးအချက်) ဒီဒုက္ခသည်တွေအရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးနည်းလမ်းရှာ ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။
ဒီတော့ အနှစ်ချုပ်တင်ပြရရင် – မနေ့က ဦးကျော်လွင် တင်သွင်းလိုက်တဲ့ စစ်ဘေးရှောင် တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည် တွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး နဲ့ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို မိုးရာသီ မကျရောက်မီ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ အမြန်ဆုံး အကူအညီပေးသင့်ကြောင်းကို တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ အရေးတကြီးအဆို ကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အလေးအနက် ထောက်ခံပါကြောင်း၊ တစ်ဆက်တည်းပြောရရင် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အနေနဲ့ ဒီအဆိုကို အတည်ပြုကာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအား တိုက်တွန်း သင့်ပါကြောင်း ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။
နစှေဲ့ – ၁၁ – ၀၅ – ၂၀၁၆
လှတျတျောဥက်ကဌနဲ့တကှ လေးစားအပျပါသော လှတျတျောကိုယျစားလှယျတျောကွီးမြား ခငျဗြား . . .
ကြှနျတျောကတော့ စဈတှမွေို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၂)ကို ကိုယျစားပွုတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးကြျောဇောဦးဖွဈပါတယျ။ အခုကြှနျတျော တငျပွဆှေးနှေးမယျ့ အကွောငျးအရာကတော့ ကြောကျဖွူမွို့နယျ အမှတျ(၂)မဲဆန်ဒနယျမွကေ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးကြျောလှငျ တငျသှငျး ခဲ့တဲ့ စဈဘေးရှောငျဒုက်ခသညျတှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ အရေးတကွီးအဆိုကို ထောကျခံပွီးတော့ လိုအပျသလို အကွံပွုဆှေးနှေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဦးကြျောလှငျရဲ့အဆိုကို အတိအကြ ဖတျပွီးပွောရမယျဆိုရငျတော့ “လကျရှိ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ ဖွဈပှားလကျြ ရှိသော တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ (AA) တပျနှငျ့ မွနျမာ့တပျမတျော တို့ ၏ ရငျဆိုငျတိုကျပှဲမြားကွောငျ့ နရေပျ စှနျ့ခှာ ထှကျပွေးလာကွရသော ဒသေခံတိုငျးရငျးသားဒုက်ခသညျမြား၏ စားဝတျနရေေး နှငျ့ လူမှုကယျဆယျရေး လုပျငနျးမြားကို မိုးမကမြီ ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့မှ အမွနျဆုံး အကူအညီပေးသငျ့ကွောငျးကို တိုကျတှနျး သညျ့ အရေးတကွီးအဆို” ဖွဈပါတယျ။
ဒီမှာ ကွားညှပျပွေားခငျြတာလေး တဈခုရှိပါတယျ။ မနကေ့ ဦးကြျောလှငျက အဆိုကို တငျသှငျးပွီးနောကျ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ နယျစပျရေးရာနဲ့ လုံခွုံရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီးထိနျလငျးက ဒီအရေးကွီးအဆိုကို အဆိုအနနေဲ့ မဆှေးနှေးစလေိုကွောငျး မှတျတမျးတငျတာပဲ ပွုလုပျစလေိုကွောငျး ကနဦးမှာ ပွောကွားခဲ့ ပမေယျ ဒုတိယတဈကွိမျဆှေးနှေးရာမှာကတြော့ ဗိုလျမှူးကွီးကပဲ ဘာပွောသလဲ ဆိုတော့ အဆိုကို ဆကျလကျ ဆှေးနှေးပါ၊ ဒါပမေဲ့ ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ရဲ့ ဒီလို ဒီလိုမြိုးတှေ ကူညီဆောငျရှကျပေးခဲ့မှုတှေ ရှိတယျ၊ အခွား အဖှဲ့အစညျးတှကေလညျး ဒီလို ဒီလို မြိုးတှေ ကူညီတာတှရှေိတယျ၊ အဲဒါတှကေိုတော့ မှတျတမျးတငျ ပေးပါ ဆိုပွီးတော့ ဒုတိယအကွိမျမှာ ဆှေးနှေးသှားပါတယျ။ ဒီတော့ ဒီမှာ ကွားညှပျပွောသှားခငျြတာက အဲသလိုမြိုး လုံခွုံရေးရာဝနျကွီး အနနေဲ့ အဆိုတငျသှငျးဆှေးနှေးခွငျးကို မကနျ့ကှကျတော့တဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျး ဖွဈပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ကိုယျစား ဗိုလျမှူးကွီး ထိနျလငျး ရဲ့ပွောကွားခကျြအရ ရခိုငျပွညျနယျထဲက ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ၊ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ၊ ကြောကျတျောမွို့နယျ နဲ့ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ တို့မှာ မကွာခငျက (ရက်ခိုငျ့တပျမတျော လို့ မိမိကိုယျကို ချေါကွတဲ့) အအေေ လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့ နဲ့ မွနျမာ့တပျမတျော တို့ အကွားဖွဈပှားတဲ့ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျလာရတဲ့ စဈဘေးရှောငျ စဈပွေးဒုက်ခသညျ IDP ဦးရေ ဟာ (၁၉၀၀) ဦး ရှိနတေယျ လို့သိရပါတယျ။ အခုဆိုရငျ ဒီထကျမက မြားကောငျး မြားနိုငျပါတယျ။
ဒုက်ခသညျတှကေို အကူအညီပေးဖို့လိုအပျတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျးကို အငွားပှားခငျြမှ အငွငျးပှားကွပါလိမျ့မယျ။ ဒီအခကျြကို အငွငျးပှားကွမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အကူအညီပေးဖို့ဆိုတာကို ဒသေဆိုငျရာအစိုးရအဖှဲ့အား တိုကျတှနျးကွောငျးအဆို အနနေဲ့ အတညျပွုဖို့ လိုအပျပါရဲ့လားလို့ အငွငျးပှားခငျြတဲ့လူ ရှိကောငျးရှိပါလိမျ့မယျ။ ဒါကို ကြှနျတျော ဆှေးနှေးလိုပါတယျ။
ဒီလိုမြိုး အဆိုတဈခုအနနေဲ့ အတညျပွုတိုကျတှနျးခွငျးအားဖွငျ့ အုပျခြုပျရေးယန်တရားကို လကျရှိ တာဝနျယူ ထားသူတှအေနနေဲ့ ဘယျတုနျးက ဘယျလို ဟိုဟာလေး တို့တိ တို့တိ၊ ဒီဟာလေး တို့တိ တို့တိ ခေါကျဆှဲခွောကျထုပျလေး ဘာလေး ဟိုတုနျးက ဒီတုနျးက ပေးထားပါတယျ ဆိုရုံနဲ့မပွီးတော့ဘူး။ တာဝနျတဈခု အနနေဲ့ ကကြနြနတာဝနျယူပွီးတော့ အစိုးရတဈရပျအနနေဲ့ ရတေိုရရှေညျတာဝနျယူပွီး ပီပီပွငျပွငျ ဆောငျရှကျ ပေးကွရတော့မှာ ဖွဈတယျ။ အဲဒီတာဝနျကို ထမျးဆောငျဖို့ လုပျပိုငျခှငျ့ နဲ့ အဲဒီတာဝနျကို ထမျးဆောငျဖို့ သကျဆိုငျရာအာဏာပိုငျအနနေဲ့ လိုအပျတဲ့ ရံပုံငှဘေဏ်ဍာရေးကဏ်ဍကိုပါ ရှာဖှစေုရုံးခှငျ့ စီမံခှငျ့ရလာမှာ ဖွဈတယျ။ မိုးမကခြငျ ဘာမှ လုံလုံလောကျလောကျမပွငျဆငျရသေးတဲ့ အနအေထားမှာ မိုးရခြေိနျ လကျမ တဈရာနှဈရာ ရှာတတျတဲ့ ဒသေမြိုးမှာ ကြှနျတျောတို့ ခေါကျဆှဲခွောကျထုပျတှေ သှားပေးထားပွီးပွီလေ . . . ကြှနျတျောတို့ ကူညီပွီးပွီပဲ . . . လို့ ဆိုရုံအနအေထားနဲ့ မလုံလောကျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အဆိုတဈခုအနနေဲ့ အတညျပွုပွီး လကျရှိဒသေန်တရအစိုးရကို တိတိပပ တှနျးအားပေးဖို့လိုပါတယျ။
ဒီနရောမှာ အခကျြ လေးခကျြ ပိုငျးခွားပွီး ဆှေးနှေးလိုပါတယျ။
နံပါတျတဈအခကျြ၊ ဒီ အယောကျ (၁၉၀၀) ကြျော (၂၀၀၀) ဝနျးကငျြသော တိုငျးရငျးသားနိုငျငံသားတှေ (နောကျ ထပျတိုးရငျလညျး ထပျတိုး သလောကျပေါ့) ဒီလူသားတှဟော စဈမကျဘေးရနျကွောငျ့ ဘဝနထေိုငျမှု မလုံခွုံတဲ့အတှကျကွောငျ့ ပွေးလှား ပုနျးရှောငျနကွေရတဲ့ ဒုက်ခသညျတှေ ဖွဈတယျ ဆိုတာကို အသိအမှတျပွုရပါမယျ။ ဒုက်ခသညျတှေ ရှိနရေငျ ရှိတယျလို့ အသိအမှတျပွုကွရပါမယျ။ ဒါကို ရခိုငျက အသိအမှတျပွုရမယျ။ မွနျမာကလညျး အသိအမှတျ ပွုရမယျ။ ဒါမှလညျး ကမ်ဘာကလညျး အသိအမှတျပွုမှာဖွဈတယျ။
နံပါတျနှဈအခကျြ၊ အခွားတပါးက ဘာမဆိုငျညာမဆိုငျ ရမြေောကမျးတငျလာသူတှေ မဟုတျတဲ့ မိမိတို့ တိုငျးရငျးသားနိုငျငံသားတှေ အပွဈမဲ့အရပျသားတှဟော နိုငျငံတှငျးမတညျမငွိမျဖွဈလို့ အခုလိုဒုက်ခရောကျ နကွေရတဲ့အခါ သကျဆိုငျရာအာဏာပိုငျမြားအနနေဲ့ နိုငျငံအစိုးရအနနေဲ့ ဒီဒုက်ခသညျတှကေို အတတျနိုငျဆုံး စောငျ့ရှောကျမှုပေးဖို့ရာ တာဝနျရှိပါတယျ။ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ပါ ပုဒျမ-၃၅၆ ပုဒျမ-၃၅၇ အစရှိတဲ့ ပွဌာနျးခကျြတှအေရ နိုငျငံသားတှဟော ကာကှယျစောငျ့ရှောကျပေးမှုကို ရထိုကျပါတယျ။ နိုငျငံသား ဒုက်ခသညျ တှကေို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျရာမှာ IDP ဆိုရငျ IDP တှအေဖွဈနဲ့ မိုးရာသီကို မိုးလုံလလေုံ ဖွတျသနျးနိုငျမယျ့ ဒုက်ခသညျစခနျးတှေ ဆောကျပေးကွရပါမယျ။ အခု ဒုက်ခသညျဖွဈနသေူအမြားစုဟာ တောတောငျကို မှီတငျးပွီး ၀ါးရှာ ငါးရှာ တဈနစေ့ာကို တဈနေ့ ရှာစားနကွေတဲ့သူတှဖွေဈကွတဲ့အလြောကျ အခုအခွအေနမှော တောထဲတောငျထဲ မဝငျနိုငျတဲ့အတှကျ စားရေးသောကျရေး ခကျခဲကုနျပါပွီ။ စားရရေိက်ခာကို ပွတျလပျ မသှားအောငျ စီစဉျပေးဖို့လိုပါတယျ။ မကွာခငျမှာ ဇှနျလ ရောကျတာနဲ့ ကြောငျးသားအရှယျတှေ ကြောငျးတကျ ကွရတော့မယျ။ ဒီအတှကျလညျး ကြောငျးသားတှေ ပညာသငျကွားနိုငျအောငျလညျးပဲ အာဏာပိုငျတှကေ စီစဉျပေးကွဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဒုက်ခသညျစခနျးရဲ့ အခွခေံလိုအပျခကျြတှဖွေဈတဲ့ ရေ၊ မီး၊ အိမျသာ တှေ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံဖွဈအောငျ စီစဉျရမယျ့ အပွငျ ကနျြးမာရေး ဝနျဆောငျမှုကို လှယျလငျ့တကူ လကျလှမျးတမီ ဖွဈအောငျ စီမံဆောငျရှကျပေးဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။ စခနျးစီမံအုပျခြုပျမှုကောငျးအောငျ၊ လုံခွုံရေးအရ အလှယျတကူတာဝနျယူနိုငျအောငျ စခနျးအငယျလေးတှေ ခှဲထားမယျ့အစား စုစညျးစခနျးတှေ ဖွဈအောငျ စီစဉျနိုငျလေ အကူအညီပေးရသူတှအေတှကျ ပိုမိုအဆငျပွေ ခြောမှလေ့ေ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒုက်ခသညျတှေ အတှကျလညျး အကာအကှယျပိုရလဖွေဈပါတယျ။
နံပါတျသုံးအခကျြ၊ ပွညျနယျအဆငျ့ စဈဘကျပိုငျး လုံခွုံရေးပိုငျး တာဝနျရှိသူတဈဦး ပွောသှားတာကို ကွား လိုကျတာ တဈခုရှိပါတယျ။ အကွောငျးအရာက ဆကျစပျနတေဲ့အတှကျ အခုအကွံပွုဆှေးနှေးတဲ့နရောမှာ အဲဒါကို မဖွဈမနေ ဆှေးနှေးဖို့ လိုအပျတဲ့အတှကျ ကြှနျတျော ဆှေးနှေးမှာဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့စကားက “နယျမွေ အခွအေနတှေဟော တညျငွိမျအေးခမျြးနပွေီ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဒုက်ခသညျတှကေို မိုးမကမြီ သကျဆိုငျရာ ကြေးရှာတှဆေီ ပွနျပို့နိုငျမယျ့ အခွအေနေ ရှိပါတယျ” ဆိုတဲ့ စကားပါ။ နယျမွတေညျငွိမျအေးခမျြးမှုရှိတယျ၊ တို့ ထိနျးထားပွီ လို့ တဈဘကျက ဆိုတယျ။ နောကျတဈဘကျကလညျး ငါတို့ အဲဒီနရောမှာ ရှိတယျ၊ သတိထား လို့ ဆိုပွနျတယျ။ အဲဒီတော့ ဗိုလျ ဗိုလျခငျြးတှကွေ့လို့ တိုကျကွရငျ ကွားကခံရတာက ပွညျသူလူထုပဲ ဖွဈပါတယျ။ မွစောပငျကတော့ ပွညျသူတှပေါပဲ။ အတညျမပွုနိုငျသေးပမေယျ့ အခုလညျး တိုကျပှဲသတငျးတှကွေိုကွားကွိုကွား ကွားနရေဆဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒုက်ခရောကျကွရတဲ့ အခွအေနတှေကွေားမှာ အမှနျတကယျ ဒုက်ခရောကျ ကွရတဲ့ ဒုက်ခသညျတှေ ရှိပါရဲ့သားနဲ့ ဒုက်ခသညျတှေ မရှိဘူးလို့ ပွခငျြတဲ့အတှကျ ဒုက်ခသညျတှကေို အတငျးအဓမ်မ နရေပျပွနျပို့ခွငျးတှေ မလုပျမိဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီလူတှဟော တကယျ့ကို ဝေးလံ ခေါငျသီတဲ့နရောက လူတှပေါ၊ နတေ့ဒူဝ တောထဲကို ဝငျပွီး ဝမျးစာ ရှာနိုငျမှ ထမငျးစားကွရတဲ့လူတှေ ဒီဒုက်ခသညျတှထေဲမှာ အမြားကွီးပါ ပါတယျ။ မတညျငွိမျတဲ့ တိုကျပှဲဖွဈနတေဲ့ အနအေထားမှာ တောထဲကို မဝငျဝံ့ကွပါဘူး။ တောထဲကို ဝငျသှားလို့ တောထဲမှာ တဈဘကျစဈတပျနဲ့တှရေ့ငျ သူပုနျကို သတငျးသှားပေးတယျ လို့ သံသယ အဖွဈခံရနိုငျတယျ။ အန်တရာယျရှိတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒီလို တငျးမာမှုရှိနတေဲ့ အနအေထားမြိူးမှာ အထမျးအမား ပျေါတာ အဖွဈ အတငျးအဓမ်မ ချေါယူခိုငျးစခွေငျး ခံရနိုငျတဲ့ အန်တရယျက အမွဲရှိနတေယျ။ ဒီလိုပျေါတာဆှဲခံရတဲ့ သာဓကတှလေညျး ရှိခဲ့တယျ။ ဆိုလိုတာက နယျမွတေညျငွိမျအေးခမျြးနပေါပွီလို့ ဘယျလောကျပဲဆိုဆို ကြှနျတျောတို့တော့ စိတျမခနြိုငျဘူး။ အပွဈမဲ့ အရပျသားတှအေတှကျ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျ လုံခွုံမယျ့ နရောမှာ စုစညျးစခနျးခထြားပေးဖို့ကိုပဲ ကြှနျတျော ထောကျခံဆှေးနှေးလိုပါတယျ။
နံပါတျလေးအခကျြ၊ ဒီဒုက်ခသညျတှအေတှကျ တဈနှဈ နှဈဝကျ စသညျဖွငျ့ ကာလအလိုကျ လိုအပျတဲ့ ဘဏ်ဍာရေး ခနျ့မှနျးတှကျခကျြမှုတှေ ပွုလုပျပွီးတော့ ဘဏ်ဍာငှရှောဖှေ စုစညျးရေးအတှကျပါ ပွငျဆငျကွဖို့ လိုအပျတယျ ဆိုတဲ့ အခကျြကိုလညျး အကွံပွု ဆှေးနှေး တငျပွလိုပါတယျ။
အတိုခြုပျရငျ – (တဈအခကျြ) စဈရှိနတေယျ၊ အကြိုးဆကျအနနေဲ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျတှေ ရှိနတေယျ။ (နှဈအခကျြ) ဒါကွောငျ့ ဒုက်ခသညျစခနျးတှနေဲ့ စနဈတကြ စား/နေ/ကနျြးမာ/လူမှု/ပညာ အကူအညီပေးဖို့လိုတယျ။ (သုံးအခကျြ) မတညျငွိမျသေးဘဲနဲ့ ဒုက်ခသညျတှကေို ပွနျပို့မယျဆိုရငျ အပွဈမဲ့ အရပျသားတှအေတှကျ အန်တရာယျရှိတယျ။ (လေးအခကျြ) ဒီဒုက်ခသညျတှအေရေးအတှကျ ဘဏ်ဍာရေးနညျးလမျးရှာ ပွငျဆငျဖို့လိုတယျ။
ဒီတော့ အနှဈခြုပျတငျပွရရငျ – မနကေ့ ဦးကြျောလှငျ တငျသှငျးလိုကျတဲ့ စဈဘေးရှောငျ တိုငျးရငျးသား ဒုက်ခသညျ တှရေဲ့ စားဝတျနရေေး နဲ့ လူမှုကယျဆယျရေးလုပျငနျးမြားကို မိုးရာသီ မကရြောကျမီ ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့အနနေဲ့ အမွနျဆုံး အကူအညီပေးသငျ့ကွောငျးကို တိုကျတှနျးလိုကျတဲ့ အရေးတကွီးအဆို ကို ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ အလေးအနကျ ထောကျခံပါကွောငျး၊ တဈဆကျတညျးပွောရရငျ ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျော အနနေဲ့ ဒီအဆိုကို အတညျပွုကာ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအား တိုကျတှနျး သငျ့ပါကွောငျး ပွောကွားရငျး နိဂုံးခြုပျအပျပါတယျ။
Rakhine State Parliament
Previous AA အား ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲ စားပှဲဝိုငျးသို့ ဖိတျချေါသငျ့ကွောငျး ၂၀၁၆-ခုနှဈက ဦးဝစေိနျအောငျ၏ အမြိုးသားလှတျတျော အဆို
Next ဌာနခြုပျကို ပဈသော အမွောကျဆံမြား အဘယျကလာသနညျး ?